Maitiro ekuisa PHP 7.2 paUbuntu neDebian | Linux Vakapindwa muropa
Kazhinji, maseva eGnu / Linux anoshandisa vhezheni yechinomwe uye 7 yePHP, asi idzi shanduro hadzisi dzazvino shanduro kana dzinonyanya kushanda, kunyangwe dziri dzakadzikama uye dzisina mburwa. Shanduro dzeramangwana remutauro uyu wechirongwa dzinonakidza uye dzinogona kunge dziri pane server yemuno kuti dziedzwe, kuyedza neyedu webhu kunyorera kana kungo dzidzira kuronga neiyi programming mutauro.
Neichi chikonzero isu tiri kuzokuudza iwe maitiro ekuwana yazvino vhezheni yePHP uye kuiisa pane Ubuntu kana Debian kana kupihwa kupihwa kwatinogona kushandisa sisitimu yekushandisa ye server. Sezvatakambotaura, hazvikurudzirwe kushandisa iyi vhezheni pane maseva ekugadzira sezvo inogona kukonzera matambudziko akakomba kana kuve nemakomba ekuchengetedza. Asi ichiri kubatsira kuyedza.
Kuisa PHP 7.2 muUbuntu neDebian isu tinofanirwa shandisa yekunze yekuchengetera uye nekuisa kutsamira kunodiwa pakuisirwa uye kumhanya iyi vhezheni itsva yePHP. Kuti tiite izvi tinovhura iyo terminal uye tinyore zvinotevera:
Ipapo tinonyora zvinotevera kuisa PHP 7.2:
Izvi zvichaisa PHP 7.2 vhezheni asi hazviite kuti iyo sisitimu yekushandisa ishandise nekutadza. Kuti tiite izvi, isu tinofanirwa kunyora zvinotevera mune terminal:
Uye kana tikashandisa LAMP server, isu tichafanirwa gadzira zvigadziriso muApache kuti igone iyi vhezheni. Kune izvi isu tinofanirwa kunyora zvinotevera mune terminal:
Nezvo tichave takaisa vhezheni 7.2 yePHP, ikozvino isu tinongoda chete kuisa ma module uye mawedzero-atinoda, asi icho chinhu chatinokusiira iwe kuchido chako uye chaunoda. Sezvauri kuona, maitiro ekumisikidza ari nyore uye anokurumidza, asi isu tinofanirwa kuyeuka kuti vhezheni yacho inogona kuunza rimwe dambudziko uye haina kukurudzirwa kuishandisa pane zvigadzirwa zvekugadzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Maitiro ekuisa PHP 7.2 paUbuntu neDebian